Qiso gaaban – Akhbaarta Wanaagsan
Category: Qiso gaaban
Lectures / Maqal / Muuqaal / Qiso gaaban
waa kuma kan imaandoono oo Ciise sheegaayo?
“markuu kan Ruuxa runta ahu yimaado, wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan” Halkan dhageyso: Halkan daawo:
All resources / Lectures / Qiso gaaban / Qoraal / Waxbaritaanka
Xertii Ciise ma aysan garan waxyaalihii uu ka hadlaayay ee ku saabsan boqortooyada Ilaah. Sidaas daraaddeed Ciise wuxuu isticmaalay Tusaale caadi ah oo ay fahmi karaan. Markaasuu ku yiri ninka …
Masaalkii Beerralayda iyo Abuurka!!
Ciise wuxuu saarnaa doon asagoo dadka wax baraya maalmo jawi degan,si fudud ayay u maqlayeen dadkii hareeraha warta biyaha agteeda joogay oo dhan. Masaalkaan waxaa laga wadaa beeralaydu waa qofka …
Ciise wuxuu yiri waxaaa jira labo boqortooyo,amaba laba ruux adduunka!
boqortooyada Ilaah taas oo ah jacaylka iyo iftiinka, iyo boqortooyada shaydaanka taas oo ah gudcur iyo shar. jinniyadu ama Shaydaanku runta wey neceb yihiin oo waxay weeraraan Addoomada Eebe. Tani …
CIISE WUXUU BOGSIIYEY QOF GACAN ‘LA MAALIN SABTI AH!
Ciise Markuu bogsiinaayay nika gacanta la,aa waxay ahayd maalin Sabti ah oo faarisiinta iyo culumada aysan wax shaqo ah qaban jirin oo ay Rabbiga quduus uga dhigi jireen,sida ku qornaa …
BUTROOS OO UGU YEEDHAY CIISE GURIGIISA!!
Kafarna’um waa magaalo ku taala dhinaca woqooyi ee badda Galiili. Ciise halkaas ayuu joogay, guriga Simoon Butroos. Simoon soddohdiisna wey xanuunsanayd markaasaa Ciise u tegey iyadii, oo gacanteeda qabtay oo …
Waa Maxay Toobbadkeenida?
Toobadkeenida Siduu Inagu Wacdiyay Yooxaana Babtiisaha Yooxaana Baabtiisaha kaasoo ku wacdiyey lamadegaanka dadka asagoo u sheegayay inay dembiyadooda kasoo toobadkeenaan (Markoos 1 : 4 ). Ciise waa Wiilka Ilaah, kan …
All resources / Lectures / Qiso gaaban
Maalmihii ugu horeeyey ee Ciise dunida ku kor noolaa
Akhristayaasheena sharfta badan waxaan Markale idiin soo ban dhigaynaa qiso gaaban oo ku saabsan dhalashadii Ciise…Ka boggasha wacan… waxyaabaha Qorniinka Quduuska ahi kaleeyahay arrinta kusaabsan Ciise ilmanimadiisii ee ( Axdigii …